ကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း Madeleine Albright ဈာပန ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များတက်ရောက်
စစ်ဒဏ်သင့် ဥရောပက ဒုက္ခသည်ကလေးငယ် အဖြစ်ကနေ အမေရိကန်မှာ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဖြစ်လာတဲ့ ကွယ်လွန်သူ Madeleine Albright ရဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဈာပနအခမ်းအနားကို ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အမေရိကန် နိုင်ငံရေးနဲ့ သံတမန်ရေး အသိုင်းအဝိုင်းက ထင်ရှားသူတွေ တက်ရောက်ကြပါတယ်။
စစ်ဒဏ်သင့် ဥရောပက ဒုက္ခသည်ကလေးငယ် အဖြစ်ကနေ အမေရိကန်မှာ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဖြစ်လာတဲ့ ကွယ်လွန်သူ Madeleine Albright ရဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဈာပနအခမ်းအနားကို ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အမေရိကန် နိုင်ငံရေးနဲ့ သံတမန်ရေး အသိုင်းအဝိုင်းက ထင်ရှားသူတွေ တက်ရောက်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးအဖြစ် ပထမဆုံး ရွေးချယ်ခန့်အပ် တာဝန်ပေးခဲ့တဲ့ သမ္မတဟောင်း Bill Clinton သမ္မတဟောင်း Barack Obama နဲ့ သမ္မတ Joe Biden တို့လည်း တက်ရောက်ဂါရဝပြုခဲ့ကြတာပါ။ (Act. President Biden)
“အမေရိကန် ဖြစ်ရတဲ့အတွက် ကျနော်တို့အားလုံး ပိုပြီးဂုဏ်ယူစရာကောင်းအောင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဂုဏ်ယူစရာ အမေရိကန် စစ်စစ်တယောက်ကို ကျနော်တို့ ဒီကနေ့ ဂုဏ်ပြုကြတာပါ။” လို့ ဧည့်ပရိတ်သတ် ၁၄၀၀ လောက် တက်ရောက်လာတဲ့ ဝါရှင်တန်မြို့တော်က National Cathedral ဘုရားကျောင်းက အခမ်းအနားမှာ သမ္မတဘိုင်ဒင် ပြောကြားသွားတာပါ။ အသက် ၈၄ နှစ်အရွယ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း Albright ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့လက ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် ကမ္ဘာတလွှားက ၀မ်းနည်းစကားပါးခဲ့ကြသလို၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုလည်း ချီးကျုးခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာ့အရေး အာရုံစိုက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သူလည်းဖြစ်တဲ့ ၀န်ကြီးဟောင်း Albright ဟာ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ၁၉၉၅ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိခဲ့ဖူးသလို၊၂၀၁၃ ခုနှစ်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိန်ရတု အခမ်းအနားကိုလည်း တက်ရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဝါရှင်တန်က ဈာပနအခမ်းအနားကိုတော့ ဂျော်ဂျီယာ၊ ကိုဆိုဗိုနိုင်ငံ သမ္မတတွေ၊ ကိုလံဘီယာ၊ ဘော့စ်နီးယားနဲ့ ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွေက အကြီးတန်း အရာရှိတွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါ။
ကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း Madeleine Albright ဈာပန
ကနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဟောငျး Madeleine Albright ဈာပန ကမ်ဘာ့ခေါငျးဆောငျမြားတကျရောကျ
စဈဒဏျသငျ့ ဥရောပက ဒုက်ခသညျကလေးငယျ အဖွဈကနေ အမရေိကနျမှာ ပထမဆုံး အမြိုးသမီး နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး ဖွဈလာတဲ့ ကှယျလှနျသူ Madeleine Albright ရဲ့ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ဈာပနအခမျးအနားကို ကမ်ဘာ့ခေါငျးဆောငျတှေ၊ အမရေိကနျ နိုငျငံရေးနဲ့ သံတမနျရေး အသိုငျးအဝိုငျးက ထငျရှားသူတှေ တကျရောကျကွပါတယျ။ နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးအဖွဈ ပထမဆုံး ရှေးခယျြခနျ့အပျ တာဝနျပေးခဲ့တဲ့ သမ်မတဟောငျး Bill Clinton သမ်မတဟောငျး Barack Obama နဲ့ သမ်မတ Joe Biden တို့လညျး တကျရောကျဂါရဝပွုခဲ့ကွတာပါ။ (Act. President Biden)
“အမရေိကနျ ဖွဈရတဲ့အတှကျ ကနြျောတို့အားလုံး ပိုပွီးဂုဏျယူစရာကောငျးအောငျ လုပျပေးခဲ့တဲ့ ဂုဏျယူစရာ အမရေိကနျ စဈစဈတယောကျကို ကနြျောတို့ ဒီကနေ့ ဂုဏျပွုကွတာပါ။” လို့ ဧညျ့ပရိတျသတျ ၁၄၀၀ လောကျ တကျရောကျလာတဲ့ ဝါရှငျတနျမွို့တျောက National Cathedral ဘုရားကြောငျးက အခမျးအနားမှာ သမ်မတဘိုငျဒငျ ပွောကွားသှားတာပါ။ အသကျ ၈၄ နှဈအရှယျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဟောငျး Albright ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့လက ကငျဆာရောဂါနဲ့ ကှယျလှနျသှားတဲ့အတှကျ ကမ်ဘာတလှားက ဝမျးနညျးစကားပါးခဲ့ကွသလို၊ ဒီမိုကရစေီနဲ့ လူ့အခှငျ့အရေးအတှကျ ကွိုးပမျးမှုတှကေိုလညျး ခြီးကြုးခဲ့ကွပါတယျ။ မွနျမာ့အရေး အာရုံစိုကျ ဆောငျရှကျခဲ့သူလညျးဖွဈတဲ့ ဝနျကွီးဟောငျး Albright ဟာ ကုလသမဂ်ဂဆိုငျရာ အမရေိကနျ သံအမတျကွီးအဖွဈ ၁၉၉၅ ခုနှဈက မွနျမာနိုငျငံကို ရောကျရှိခဲ့ဖူးသလို၊၂၀၁၃ ခုနှဈက ရနျကုနျတက်ကသိုလျ စိနျရတု အခမျးအနားကိုလညျး တကျရောကျခဲ့ဖူးပါတယျ။
ဝါရှငျတနျက ဈာပနအခမျးအနားကိုတော့ ဂြျောဂြီယာ၊ ကိုဆိုဗိုနိုငျငံ သမ်မတတှေ၊ ကိုလံဘီယာ၊ ဘော့ဈနီးယားနဲ့ ခကျြသမ်မတနိုငျငံတှကေ အကွီးတနျး အရာရှိတှေ တကျရောကျခဲ့ကွတာပါ။
ပထမဆုံး အမေရိကန် အမျိုးသမီး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မက်ဒလင်း အောဘရိုက်